कांग्रेसमा रूपान्तरणका लागि पुस्तान्तरण किन ? :: योगराज लामिछाने :: Setopati
नेपालले राजनीतिक परिवर्तन पटकपटक बेहोर्‍यो। विडम्बना के भने पार्टीहरूको कार्यशैलीमा रूपान्तरण आएन। विकास धिमै रह्यो। त्यसको कारण अहिलेको नेतृत्व पुस्तामा व्याप्त दृढ इच्छाशक्तिको अभाव हो भन्ने पार्टीभित्र र बाहिरका युवा पुस्ताको ठम्याइ छ।
रूपान्तरणले राजनीतिक अभियानलाई फरक ढंगले सञ्चालन गर्ने शैली माग्छ। त्यो शैली समयलाई समात्न सक्ने युवामा हुन्छ। ठूलो संख्यामा सहभागी जुटाउने कला अनि व्यापक स्तरमा बहसलाई उठान गर्ने सिप युवा नेतृत्वमा हुन्छ भन्ने उदाहरण कोरोनाकालको बालुवाटार केन्द्रित 'इनफ इज इनफ' अभियानलाई लिन सकिन्छ।
आफ्नो पार्टीका गलत कार्यकलापविरूद्ध बोल्नेहरू नै पार्टीका इमानदार सिपाही हुन् भन्ने बिपीको विचारलाई आत्मसात गर्दै 'मेरो कमजोरी औ‌ंल्याइदिने कार्यकर्ता नै मेरो प्रिय साथी हो' भन्ने नेता पाउन मुश्किल छ।
'मेरो कार्यशैली मन नपराउने नेता-कार्यकर्ताले मलाई सोझै सम्पर्क गरी सुझाव दिँदा म खुसी हुनेछु' भन्ने आलोचनात्मक चेत भएका नेतृत्वबाट नै खासमा पार्टी संगठन मझबुत हुन्छ। लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। यसका लागि नेता उदारवादी हुन जरूरी छ। कार्यकर्ता बिचौलिया नभइकन विवेकशील हुन आवश्यक छ। नेतामुखी नभएर जनमुखी हुन अनिवार्य छ। जनताका समस्या र सोचलाई सार्थक ढंगले निर्णायक मुकामसम्म पुर्‍याउने इच्छाशक्तिले भरिपूर्ण हुनुपर्नेछ। यस्ता सर्तहरूको पालना गर्ने कार्यकर्ताको नेतृत्वमा मात्र पुस्तान्तरण सम्भव हुन्छ।
नेपाली कांग्रेसका ३३ प्रतिशत क्रियाशील सदस्य ४० वर्षभित्रका छन् र हालसम्म सम्पन्न वडा अधिवेशनमा त्योभन्दा ठूलो अनुपातमा युवा क्षेत्रीय प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएका छन्। यी क्षेत्रीय प्रतिनिधिले आफूलाई मतदातामा मात्र सीमित नराखी आफू र आफ्नो वर्गलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने दायित्व छ। जनभावनाअनुसार काम गर्न सकेन भनेर दुत्कार्ने मात्र भन्दा पनि नेतृत्व छनोटकै बखतमा मताधिकारलाई होसियारीपूर्वक प्रयोग गर्नु वैज्ञानिक हुन्छ। युवा वर्गलाई भविष्यका नेता भन्दै लामो प्रतीक्षासूचीमा सीमित नराखी नीति निर्माण तहमा पुर्‍याउने दायित्व पनि आम क्षेत्रीय प्रतिनिधिको हो। विशेषतः युवा क्षेत्रीय प्रतिनिधिको हो।
महिलालाई मतदाताकै रूपमा सीमित पार्ने षड्यन्त्रलाई कमजोर पार्ने गरी अभियान चलाउन महिला आन्दोलन अझै सफल देखिँदैन। यस्तै नियति नेपाली कांग्रेसभित्रको युवा आकर्षण र अभियानले पनि बेहोर्‍यो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। यही युवाले पनि आफूलाई पनि आफूलाई मतदातामै सीमित राखे भने पुस्तान्तरणमार्फत रूपान्तरण गर्ने सपनाले आकार ग्रहण गर्न सक्ने छैन।
के नेपाली युवामा पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने योग्यता र योजना छैन?
यस्ता नयाँ युवा मतदातामध्येका दुईतिहाई युवालाई आकर्षण गर्न सके पनि आगामी निर्वाचनमा नेपाली का‌ग्रेसले स्पष्ट बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुग्न सक्ने देखिन्छ। अघिल्लो पुस्तामा यस्तो भरोसा लाग्दो नेतृत्व भेटिँदैन। त्यसैले देशको रूपान्तरणका लागि आवश्यक रूपान्तरित कांग्रेस निर्माण गर्न पनि कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरण अनिवार्य छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २, २०७८, ०४:०४:२२